Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Jamaika amin'ny faran'ny herinandro paska: fitomboan'ny isan'ny tonga
Vaovao Karaiba • etn • Lahatsoratra mampiavaka • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika • fanorenana • Vaovao momba ny fizahantany • Travel • Toerana fitsangatsanganana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika Hon. Nanondro i Edmund Bartlett fa isan-taona dia nampiantrano mpandeha 209,930 tany Jamaika i Jamaika, 164,157 ny mpizahatany.
Nandritra ny faran'ny herinandro Paska dia nandrakitra fisondrotana lehibe ny fahatongavan'ireo mpitsangatsangana i Jamaika, miaraka amin'ny isan'ny mpitsidika ny isan'ny mpitsidika hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana COVID-19.
Nanomboka ny 1-5 aprily, mpitsidika efa ho 15,000 no nijanona tao amin'ilay firenena nosy.
Mbola any an-tampon'ny sain'ny mpitsidika antsika i Jamaika, ary mandroso hatrany amin'ny famerenana amin'ny laoniny tanteraka isika, hoy ny minisitra Bartlett.
"Araka ny angon-drakitra vonjimaika avy amin'ny Birao Mpizahatany ao Jamaika (JTB), Jamaica dia nanoratra mpitsidika 14,983 tany amin'ilay nosy tamin'ny 1 ka hatramin'ny 5 aprily 2021. 13,000 mahery amin'ireo mpitsidika ireo no niditra tao amin'ilay nosy tamin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Sangster any Montego Bay," hoy ny Minisitra nanazava.
Avy eo ny minisitra Bartlett dia nanoritsoritra fa ny faran'ny herinandro Paska dia nandrakitra fitomboana lehibe amin'ny fahatongavan'ireo olona mijanona, miaraka amin'ny nosy manoratra mpitsidika betsaka indrindra hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana COVID-19.
“Tena nampahery ahy ny angon-drakitra voarainay, satria mampiseho fa mbola ambony ny sain'ny mpitsidika anay i Jamaika ary mandroso hatrany izahay amin'ny famerenana amin'ny laoniny tanteraka ny sehatra misy anay. Midera ny ekipa aho ao amin'ny Jamaika Tourist Board, ho an'ny fampielezan-kevitra amin'ny fomba mahery setra sy manavao, izay hita fa nisy vokany. Ny fiderana manokana dia tsy maintsy omena ihany koa ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany sy ireo mpiara-miombon'antoka aminay amin'ny asa mafy ataon'izy ireo koa amin'ny marketing an'i Brand Jamaica amin'izao tontolo izao, "hoy ny minisitra Bartlett.
Nanamarika ihany koa ny minisitra fa ny solontenan'ny orinasam-pampandrosoana vokatra fizahan-tany (TPDCo) sy ireo orinasam-panjakana hafa, dia nitsidika trano maro tamin'ny faran'ny herinandro-faran'ny herinandro mba hijery ireo orinasa ary koa hijerena ny fanarahan-dalàna, ataon'ny mponina sy ny mpitsidika, miaraka amin'ny fahasalamana COVID-19. sy ny mari-pamantarana fiarovana.
"Faly izahay mizara fa ny tatitra voarain'ny Minisitera dia manondro fa nisy ny fanarahan-dalàna matanjaka, satria ny mpilalao ao amin'ity sehatra ity dia nampihatra fepetra henjana COVID-19 tamin'ny faran'ny herinandro fialan-tsasatra, na teo aza ny fisian'ny olona be dia be amin'ny ankamaroan'ny trano. Tokony hidera ireo mpiara-miombon'antoka aminay noho izany antoka izany fa nanana traikefa azo antoka nefa tsy hay hadinoina ireo vahinin'izy ireo, "hoy i Bartlett.